Salamo 34 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (Sal 34)
[Salamo abidy. Fisaorana sy anatra nataon'izay efa novonjena tamin'ny fahoriana] Nataon'i Davida tamin'izy nody adala teo anatrehan'i Abimeleka, dia noroahiny ka lasa nandeha. Hisaotra an'i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy.
Jehovah no reharehan'ny fanahiko; hahare izany ny mpandefitra ka ho fay.
Miaraha mankalaza an'i Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika.
Mitady an'i Jehovah aho, dia mamaly ahy Izy ka manafaka ahy amin'ny tahotro rehetra.
Mijery Azy ireo ka miramirana, sady tsy mangaihay ny tavany.
Ity olo-mahantra ity niantso, dia nihaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra.
Ny Anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka mamonjy azy.
Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy.
Matahora an'i Jehovah, ianareo olony masina;fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy.
Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana. Fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy ho orin-java-tsoa akory.
Avia, anaka, mihainoa ahy; ny fahatahorana an'i Jehovah no hampianariko anareo.
Na iza na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro hahitana ny soa,
Dia arovy ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka.
Halaviro ny ratsy, manaova soa; mitadiava fihavanana, ka araho izany.
Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fitarainany.
Ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa, mba hofongorany tsy ho eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy.
Mitaraina ny marina, ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra.
Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy izay torororo fanahy.
Maro ny fahorian'ny marina; nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany.
Miaro ny taolany rehetra izy; tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza.
Hahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana; ary ny mankahala ny olo-marina hohelohina.Fa Jehovah manavotra ny fanahin'ny mpanompony, ka tsy mba hisy hohelohina izay rehetra mialoka aminy.
Fa Jehovah manavotra ny fanahin'ny mpanompony, ka tsy mba hisy hohelohina izay rehetra mialoka aminy.